इतिहासकै सबैभन्दा बढी आरोही सगरमाथामा | गृहपृष्ठ
Home समाचार इतिहासकै सबैभन्दा बढी आरोही सगरमाथामा
जेठ ९, काठमाडौं । सगरमाथा आरोहणको वसन्त ऋतुको याममा इतिहासकै सबैभन्दा बढी आरोहीले सगरमाथाको चुचुरो चुमेका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार यस याममा जारी हिमाल आरोहणका क्रममा बिहीवारसम्म ३५० भन्दा बढी आरोहीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् ।
विभागको पर्वतारोहण शाखाका अनुसार यस याममा सगरमाथा आरोहणका लागि ४४ आरोही समूहका ३८१ ले आरोहण अनुमति लिएका छन् । सन् २०१८ मा ३८ आरोही समूहका ३४६ ले आरोहण अनुमति लिएका थिए । जसमा शेर्पा आरोहीसहित ७२१ ले सगरमाथा आरोहण गरेको विभागले बताएको छ । यस्तै सन् २०१७ मा ४३ आरोही समूहका ३६६ आरोहीले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएका थिए । यसअघि सन् २०१३ मा करीब ५०० र सन् २०१६ मा ४५१ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । सन् २०१४ मा हुदहुद आँधी र सन् २०१५ मा भूकम्पका कारण सगरमाथा आरोहण रोकिएको थियो ।
सगरमाथा आरोहण इतिहासमा यस पटक सबैभन्दा बढी आरोही सगरमाथा आरोहणमा गएका र हालसम्म ३५० भन्दा बढीले चुचुरो चुमेको विभागका निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिइन् । बिहीवार बिहान मात्रै ५० आरोहीले सगरमाथा आरोहण गरेको उनले बताइन् ।सगरमाथासहितका विभिन्न हिमाल आरोहण गर्न ९०० को हाराहारीमा स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । यस याममा कूल ११३ आरोही समूहका ८६८ आरोहीले आरोहण अनुमति लिएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस वर्षको वसन्त ऋतुको सगरमाथा आरोहण गत वैशाख ३१ गते शुरु भएको थियो । तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमण्ड हिलारीले सन् १९५३ मे २९ तारिखका दिन ८ हजार ८४८ मिटर अग्लो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पहिलो पटक पाइला टेकेका थिए । त्यसयता ६६ वर्षको अवधिमा ८ हजारभन्दा बढी पर्वतारोही शिखरमा पुगिसकेका छन् । आरोहणकै क्रममा अहिलेसम्म करीब २९० आरोहीले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ । आरोहण श्रृखंलामा नयाँ नयाँ कीर्तिमान पनि कायम भएका छन् ।
सगरमाथा आरोहीको संख्या मात्रै हैन, आरोहणमा नयाँ विश्व कीर्तिमान पनि कायम भएका छन् । यस याममा कीर्तिमान आरोही कामिरिता शेर्पाले यही जेठ ७ गते २४औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् । शेर्पाले यसअघिको आफ्नै २३औं पटकको सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान तोड्दै नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन् ।
यसअघि आरोही शेर्पाले जेठ १ गते सगरमाथाको २३औं पटक आरोहण गरेका थिए । । सोलुखुम्बुको थामेगाउँमा जन्मिएका ४९ वर्षीय कामिरिताले आगामी वर्ष २५ औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेर सन्यास लिने यसअघि नै बताइसकेका छन् । यसअघि आप्पा शेर्पा र फुर्वा टासी शेर्पाले २१ पटक सगरमाथा आरोहण गरी कीर्तिमान बनाएका थिए । सगरमाथासहितका २८ हिमाल आरोहणका लागि नेपालसहित ४८ मुलुकका आरोही हिमाल आरोहणमा निक्लिएका छन् ।
यस याममा हिमाल आरोहणबाट करीब रू. ५० करोड सलामी दस्तुर जम्मा भएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै रू. ४४ करोड ४२ लाख ४३ हजार सगरमाथाबाट मात्र छ । सगरमाथा आरोहणका लागि विदेशीलाई ११ हजार अमेरिकी डलर र नेपालीलाई रू. ७५ हजार सलामी दस्तुर लाग्छ । नेपालमा हाल ५ हजार ८०० मिटर अग्ला ४०३ ओटा हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गरिएका छन् ।
भूर्गभविद् डा. हर्क गुरुङको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ५ हजार ८०० मिटरभन्दा अग्ला १७ हजार हिमाल आरोहण योग्य छन् । १ हजार ३८९ हिमालको आरोहण खोल्न बाँकी छ । विश्वका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ ओटा हिमालमध्ये नेपालमा ८ ओटा छन् । रासस